आजबाट जिल्लाभित्रका सवारी पास रद्द, अत्यावश्यक कामकाे लागि कसरी लिने पास? -
आजबाट जिल्लाभित्रका सवारी पास रद्द, अत्यावश्यक कामकाे लागि कसरी लिने पास?
३ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०८:३० 168 पटक हेरिएको
काठमाडौं । देशभर जारी लकडाउनको बेला जिल्लाभित्र सवारी साधन सन्चालन गर्न जारी गरिएका सबै प्रकारका पासहरु आजबाट रद्द गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी जेठ ३ गतेबाट जिल्ला भित्रका सवारी पास रद्द गरिएको जानकारी गराएको थियाे। सोही सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि छुट्टै सूचना जारी गरेर सवारी पास रद्द गरिएको जानकारी दिएका छन्।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने सवारी पास चाहिएमा जुन जिल्लामा जानु पर्ने हो, त्यो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र सवारी पास जारी गर्नुपर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सवारी पास चाहिएमा गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति चाहिने छ । सन्चारकर्मीहरु भने सूचना विभागबाट जारी भएको पास देखाएर आउ–जाउ गर्न सक्नेछन्।
यसअघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने पास जेठ १ गतेदेखि नै रद्द गरिएको थियो ।
कोरोना संक्रमितहरू लगातार फेला पर्न थालेपछि लकडाउनलाई कडाइ गर्ने नीतिअनुसार सबै प्रकारका पासहरु रद्द गरिएको शर्माले बताए । यसअघि गृहमन्त्री, काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त बैठकमा लकडाउनलाई कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।